Puntland oo meel fagaaro ah ku gubtay Qaad si sharci ah lagu soo geliyay Boosaaso – Geelle Magazine
Puntland oo meel fagaaro ah ku gubtay Qaad si sharci ah lagu soo geliyay Boosaaso
Taliska Qeybta Booliska Gobalka Bari ee Maamulka Puntland oo kaashanaya Saraakiisha Ciidamada Gobolka ayaa Caawa goob fagaare ah ku gubay Qaad si sharci darro ah loogu dhex iibinayey Gudaha Magaalada Boosaaso.
Howlgal ay Ciidamada Puntland ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Boosaaso ayaa lagu soo qabtay qaadkaas, iyada oo ay Puntland mamnuucday in deegaannadeeda la keeno qaadka, iyada oo laga hortagayo Cudurka Coronavirus.
Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamed oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu gubayey Jaadka ayaa sheegay in iyaga oo fulinaya Amarkii Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni si Shacabka Puntland ay naftooda uga ilaaliyaan Cudurka Coronavirus ay qaadeen qorshayaal ka dhan ah Qaadka lasoo geliyey Boosaaso iyo guud ahaan Gobolka Bari.
Taliyaha oo sii hadlayey waxa uu digniin u diray dadka Gudaha magaalada Boosaaso iyo degmooyinka kale ee Gobolka Bari sida qarsoodiga ah kusoo gelinaya jaadka, iyaga oo aan u hoggaansamin amarkii Madaxda Sare ee Puntland.
Liiska Musharraxiinta Xilka Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lasoo saaray